FIFA The Best ဆုအတွက် ပဏာမ(၁၀)ဦးစာရင်းကို ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာပါ
ဖီဖာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆုအတွက် ပဏာမ (၁၀)ဦးစာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်လာမလဲ
24 Jul 2018 . 11:54 AM
ဥရောပထိပ်သီးဘောလုံးသမားတွေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်နဲ့ မျှော်လင့်နေရတဲ့ ဖီဖာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆု (The Best)အတွက် ပဏာမ(၁၀)ဦးစာရင်းကို ဒီနေ့(အင်္ဂါ)မှ ဖီဖာက ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးဆုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတွေကလည်း ဆုရရှိဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ။
The Best ဆုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ပြန်ပြောင်းသတိရအောင် ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(FIFA)ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကနေ စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံး ဆုရရှိခဲ့သူကတော့ ဂျာမန်ဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီး မာသီးယက်စ် Matthäus ပါပဲ။ ၂၀၁၀ မှာတော့ ဖီဖာဟာ နာမည်ကျော်ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တာကြောင့် FIFA Ballon d’Or အမည်နဲ့ ပြောင်းလဲ ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ (၅)နှစ်အကြာမှာပဲ ဖီဖာနဲ့ ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းတို့ ဆက်လက် မပူးပေါင်းတော့တဲ့အတွက် ၂၀၁၆ က စလို့ The Best FIFA Men’s Player Award ဆိုပြီး နာမည်သစ်၊ ဆုပုံစံအသွင်သစ်နဲ့ ပြန်လည် ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကစပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ဆုအများဆုံးရရှိခဲ့သူတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မက်ဆီ Messi တို့ပါပဲ။ တစ်ယောက်ကို (၅)ကြိမ်စီ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကစလို့ ၂၀၁၇ အထိ သူတို့နှစ်ဦးပဲ အပြန်အလှန် ရယူနေကြတာပါ။
The Best FIFA Men’s Player Award လို့ ပြောင်းလဲချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက နောက်ဆုံး(၂)နှစ်ဆက် (၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇)ရယူခဲ့ပြီး ဒီနှစ်မှာလည်း (၃)ကြိမ်ဆက် ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ ရေပန်းစားနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်နှစ်တွေကလို မဟုတ်တာက ဒီနှစ် The Best ဆုအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒို၊ မက်ဆီတို့ကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကစားသမားတွေ အများကြီးရှိနေလို့ပါပဲ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ ပြင်သစ်အသင်း ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann ၊ ဘာပေ Mbappe ၊ ခရိုအေးရှားကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ် Modric ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံတောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Hazard တို့အနေနဲ့လည်း အခုထုတ်ပြန်မယ့် ပဏာမ (၁၀)ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်လာဖို့ ရာနှုန်းများနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့(၂)နှစ်က The Best ဆုအတွက် ပဏာမစာရင်းထုတ်ပြန်ရင် ကစားသမား(၂၃)ဦးအထိ ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် အခုနှစ်မှာတော့ (၁၀)ဦးသာ ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပဏာမ(၁၀)ဦးရွေးချယ်တာမှာ ကာကာ Kaka ၊ ဒရော့ဘာ Drogba ၊ လမ်းပတ် Lampard တို့အပါအ၀င် နာမည်ကြီးဘောလုံးသမားဟောင်းတွေက ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပဏာမစာရင်းထွက်ပေါ်လာပြီးရင် နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ နည်းပြတွေ၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေက မဲပေးဖို့ ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် သြဂုတ်လ(၁၀)ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိ မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဖီဖာက ဆန်ခါတင်(၃)ဦးကို ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ စက်တင်ဘာ(၂၄)ရက်ကျရင် လန်ဒန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဖီဖာရဲ့ The Best ဆုကို ဘယ်သူရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားသေးခင် ဘယ်သူတွေ ပဏာမ(၁၀)ဦးစာရင်းမှာ ပါဝင်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရင်ခုန်လိုက်ရအောင် . . . .
ဖီဖာကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဆုအတှကျ ပဏာမ (၁၀)ဦးစာရငျးမှာ ဘယျသူတှေ ပါဝငျလာမလဲ
ဥရောပထိပျသီးဘောလုံးသမားတှေ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုအပွညျ့နဲ့ မြှျောလငျ့နရေတဲ့ ဖီဖာကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဆု (The Best)အတှကျ ပဏာမ(၁၀)ဦးစာရငျးကို ဒီနေ့(အင်ျဂါ)မှ ဖီဖာက ထုတျပွနျကွညောသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီဆုဟာ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအရှိဆုံးဆုတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ နာမညျကြျော ဘောလုံးသမားတှကေလညျး ဆုရရှိဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြကိုယျစီနဲ့ပါ။
The Best ဆုနဲ့ပတျသကျတဲ့ သမိုငျးကွောငျးကိုလညျး ပရိသတျတှေ ပွနျပွောငျးသတိရအောငျ ဖျောပွခငျြပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ(FIFA)ဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို ၁၉၉၁ ခုနှဈကနေ စတငျခြီးမွှငျ့ခဲ့ပွီး ပထမဆုံး ဆုရရှိခဲ့သူကတော့ ဂြာမနျဂန်ထဝငျကစားသမားကွီး မာသီးယကျဈ Matthäus ပါပဲ။ ၂၀၁၀ မှာတော့ ဖီဖာဟာ နာမညျကြျောပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးနဲ့ ပူးပေါငျးခဲ့တာကွောငျ့ FIFA Ballon d’Or အမညျနဲ့ ပွောငျးလဲ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တယျ။
ဒါပမေဲ့ (၅)နှဈအကွာမှာပဲ ဖီဖာနဲ့ ပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးတို့ ဆကျလကျ မပူးပေါငျးတော့တဲ့အတှကျ ၂၀၁၆ က စလို့ The Best FIFA Men’s Player Award ဆိုပွီး နာမညျသဈ၊ ဆုပုံစံအသှငျသဈနဲ့ ပွနျလညျ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၁၉၉၁ ခုနှဈကစပွီး ၂၀၁၇ ခုနှဈအထိ ဆုအမြားဆုံးရရှိခဲ့သူတှကေတော့ ထုံးစံအတိုငျး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မကျဆီ Messi တို့ပါပဲ။ တဈယောကျကို (၅)ကွိမျစီ ဆှတျခူးခဲ့ပွီး ၂၀၀၈ ခုနှဈကစလို့ ၂၀၁၇ အထိ သူတို့နှဈဦးပဲ အပွနျအလှနျ ရယူနကွေတာပါ။
The Best FIFA Men’s Player Award လို့ ပွောငျးလဲခြီးမွှငျ့ခဲ့တဲ့အခြိနျမှာတော့ စီရျောနယျလျဒိုက နောကျဆုံး(၂)နှဈဆကျ (၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇)ရယူခဲ့ပွီး ဒီနှဈမှာလညျး (၃)ကွိမျဆကျ ဆှတျခူးနိုငျဖို့ ရပေနျးစားနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ အရငျနှဈတှကေလို မဟုတျတာက ဒီနှဈ The Best ဆုအတှကျ စီရျောနယျလျဒို၊ မကျဆီတို့ကို စိနျချေါနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ကစားသမားတှေ အမြားကွီးရှိနလေို့ပါပဲ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံ ပွငျသဈအသငျး ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဂရဈဇျမနျး Griezmann ၊ ဘာပေ Mbappe ၊ ခရိုအေးရှားကှငျးလယျလူ မိုဒရဈ Modric ၊ ဘယျလျဂြီယံတောငျပံကစားသမား ဟာဇကျ Hazard တို့အနနေဲ့လညျး အခုထုတျပွနျမယျ့ ပဏာမ (၁၀)ဦးစာရငျးမှာ ပါဝငျလာဖို့ ရာနှုနျးမြားနပေါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့(၂)နှဈက The Best ဆုအတှကျ ပဏာမစာရငျးထုတျပွနျရငျ ကစားသမား(၂၃)ဦးအထိ ရှေးခယျြခဲ့ပမေယျ့ အခုနှဈမှာတော့ (၁၀)ဦးသာ ထုတျပွနျမှာဖွဈပါတယျ။
ပဏာမ(၁၀)ဦးရှေးခယျြတာမှာ ကာကာ Kaka ၊ ဒရော့ဘာ Drogba ၊ လမျးပတျ Lampard တို့အပါအဝငျ နာမညျကွီးဘောလုံးသမားဟောငျးတှကေ ဆုံးဖွတျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ပဏာမစာရငျးထှကျပျေါလာပွီးရငျ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးခေါငျးဆောငျတှေ၊ နညျးပွတှေ၊ ပရိသတျတှနေဲ့ ဂြာနယျလဈတှကေ မဲပေးဖို့ ပွငျဆငျရမှာဖွဈပွီး လာမယျ့ သွဂုတျလ(၁၀)ရကျနမေ့တိုငျခငျအထိ မဲပေးခှငျ့ရှိပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ ဖီဖာက ဆနျခါတငျ(၃)ဦးကို ရှေးခယျြသှားမှာဖွဈပွီး ဆုပေးပှဲအခမျးအနားကိုတော့ စကျတငျဘာ(၂၄)ရကျကရြငျ လနျဒနျမွို့မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာပါ။
ပရိသတျကွီးရေ .. ဖီဖာရဲ့ The Best ဆုကို ဘယျသူရမလဲဆိုတာ မစဉျးစားသေးခငျ ဘယျသူတှေ ပဏာမ(၁၀)ဦးစာရငျးမှာ ပါဝငျလာမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရငျခုနျလိုကျရအောငျ . . . .